ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လွန်စွာ စိတ်ထိခိုက်ရပါသည်
"အထွေထွေ မကျေနပ်ချက်များအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ပုံမချသင့်ဟု စာရေးဆရာဆရာဦးကျော်ဝင်း သုံးသပ်"
အစီရင်ခံစာကတော့ ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်ဘက်က နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားထားတာလို့ မြင်တယ် အခုအခြေအနေမှာ ကော်မရှင်က အကြံပြုတာဟာ အကောင်းဆုံးအဖြေပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ယေဘုယျပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်ကတော့ ဘ၀င်ကျတယ်။ လက်ရှိဆန္ဒပြနေတဲ့ ကိစ္စတွေကို ကျွန်တော်နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ တောသူတောင်သား ၊တော်သူတောင်သားမှ မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ တွေလည်းအပါအ၀င်ပေါ့ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့်ဓါးမဦးချ လယ်ကို မဆုံးရှုံးချင်ကြဘူးပေါ့ဗျာ။ ဆန္ဒပြခွင့်လည်း ရှိနေတော့ ဆန္ဒပြကြတာဟာ သူဟာနဲ့သူတော့ သဘာဝါကျပါတယ်။ သို့သော် တစ်ခုရှိတာက ဆန္ဒပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဘောင်တစ်ခုအတွင်းက ပြနိုင်ကြဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာ နို့မို့ရင် မကောင်းဘူးပေါ့။ နောက်တစ်ခုက အခုဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း သူကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်း ရှိသ၍ ကြိုးစားပြီးတော့ တိုင်းပြည်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားတာပဲ အဲ့ဒါကို သူ့အပေါ် နားလည်ပေးဖို့လိုမယ်။ အဲ့တော့ အထွေထွေ မကျေနပ်ချက် တွေကို သူ့အပေါ်ပုံချတာကတော့ သိပ်သဘာဝမကျဘူးလို့ ထင်တယ် ဒါကတော့ စဉ်းစားစေချင်တယ်
မနေ့က အင်မတန်စိတ်မကောင်းလဲဖြစ် ဒေါသလဲဖြစ်ရတယ်။သေသွားတော့မှ အာဇာနည်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး လွမ်းစာတွေ ဖွဲ့တာ လက်မခံဘူး။ သူ ၆၇ နှစ်ရှိပါပြီ။ အချိန်မရှိပါဘူး။ သူလုပ်နိုင်တုန်းလေးမှာ လက်တွဲနိုင်တာ တွဲပါ။ မတွဲနိုင်ရင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး သဘောကွဲပါ။ဝေဖန်ပါ။ ဆွေးနွေးပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မကြိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေး ညစ်လုံးတွေ သတ်လုံးတွေနဲ့တော့ ခါးအောက်ပိုင်း မထိုးနဲ့။ လူကြီးလူကောင်းလို ယှဉ်ပါ။ သူလုပ်တာကို လက်မခံရင် ခင်ဗျားတို့ တခြားရွေးချယ်စရာပေးပါ။ အကုန်လိုက်ဖျက်မယ် ဆန့်ကျင်မယ်ဆိုရင် ဒီမြန်မာလူထုအတွက် ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ။
စစ်အုပ်စုရဲ့ လူထုလို့ နာမည်တပ်သူတွေက က ဒီစစ်ကိုင်းတိုင်းထဲက ဒီပဲရင်းမှာဘဲ ၂၀၀၃က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သေးတယ်။ ခုတခါ ဒါမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး။ နောက်ကွယ်က မြှောက်ပေးသူတွေရော မနေ့က ရန်ကုန်ကလာတဲ့ သပိတ်သမားတွေရောသိထားသင့်တာက လူထု လူထု ဆိုပြီး လူတအုပ်နဲ့တော့ မခြိန်းခြောက်နဲ့။ ရန်ပြူဖို့ မကြိုးစားနဲ့။ ၁၉၉၀ မှာရော ၂၀၁၂ မှာရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တောင်ပြိုကမ်းပြို နိုင်ခဲ့တာ ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုကြောင့်ပါ။
Lynnlynn Artist (အဆိုတော်လင်းလင်း)
No worry Aunty Su. I support you. I do believe your brave decision is only for our lovely Country. Some of the activist doing their own business using those innocent people. Yes they all want to see collapse of the Country for their survival. Then they all get back finical support from western county and other Demo activist also they get political profit. That’s I understand survival for them all. So that they all must shout loud, bring innocent people to the road; create the conflicts, more violence then they get more and more famous by short cut way. I want to say them “You all can do this way. This is your own business. No needs to see not only innocent people faces but also Country. Go ahead. Just do it. No needs to respect the law. You all above the law”
They are “ENEMY OF THE STATES”.
မောင်ဝံသရဲ့လက်ပတောင်းတောင်စီမံကိန်းပေါ်အမြင်
တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားရှိမယ်ဆိုရင် ဒေသခံမကျေနပ်တာ အပထား၊လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ငါက ရေမြေ့သခင်ဖြစ်တယ်
ဆိုပြီး ငါလုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမိုကရေစီမဟုတ်တော့ဘူး။တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် ဒေသခံတွေက စတေးခံပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုရင်
ဒါဟာ သဘာဝမကျဘူး။ ပီရူးမှာဆိုရင် သမ္မတကိုယ်တိုင်က အမိန့် ထုတ်တယ်။
ဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို မလုပ်ဆောင်ရ” ဆိုပြီး အမိန့် ထုတ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုကမ္ဘာ့ အစဉ်အလာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒေသခံက အနစ်နာခံရမယ်ဆိုရင် ဘယ်အတိုင်းအတာထိ အနစ်နာခံရမလဲ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ သယံဇာတတွေ
ထက်ဘယ်သူကအကျိုးစီးပွားရှိမလဲဆိုတာ သေချာဂဃနဏ ပြန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
Daw Su is protecting U Thein Sein Government. We should not believe whatever Daw Su said. I don't understand why Daw Su is changing her mind to protect the government rather than local people.
လွန်စွာစိတ်ထိခိုက်ရပါသည် .. ဆိုရင် သေလိုက်တော့
အလှပြင် တရားမှတ် နေတာပဲကောင်းတယ်
Go and Die quick ! Idiot !!
အလွန်စိတ်ထိခိုက်နေရင် ပါတီထောင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်
လူမွဲတွေ သူဌေးဖြစ်ပီ ဆိုသလိုပေါ့
Most of people still believe in “CONFRONTATION”. They don’t know about the “NEGOTIATION”. They are “COMMUNISM”. They are not Democratic. You should look for 60 millions of people rather6thousands people.
တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဆိုတာက ဘာမှအရေးမကြီးဘူး
ကင်မရာတွေရှေ့ မှာ ဒရာမာလုပ်ပြဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။
အမျှော်အမြင်ကြီးတဲ့၊ ရိုးသားတဲ့၊ ရဲရင့်တဲ့
ဒီမိုကရေစီ ရှေ့ ခရီးအတွက်
မှောက်ချည် လှန်ချည်နဲ့ လိုရာရောက်အောင်
စစ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး နှစ်ဘက်စလုံးထူးချွန်တဲ့
နိုင်အောင်နဲ့ ခင်ဥမ္မာတို့ လင်မယား အပြူးလိုက်ရှိတယ်။
သူရိန်ကျော်ဇော် (ခေါ်) ဝတုတ် တယောက်လုံးရှိတယ်။
ထစ်ကနဲဆို လမ်းပေါ်မှာ အော်ပြီးသားဆိုတဲ့
ငါတို့အပေါ် မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်ချစ်ပြတတ်တဲ့
မွှန်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အိညက်အိညက်နဲ့ အမှောင်ခွင်းမယ့်
ဖေ့စ်ဘုတ်ချိုတူးဇော်(ရဲရဲတောက် ယူအက်စ်အေ) ရှိတယ်။
လိုအပ်လာရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုပါ ကလော်ဆဲမယ့်
ပြည်သူတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ လမ်းမှန်ညွှန်ပြတည့်မတ်မယ့်
လူပုံနဲ့ လုပ်ရပ်က မနှဲလေးနဲ့တူပေမယ့်လဲ
ရှေ့ ဆက်ပြီးလဲ ရိုင်းပါစေတော့။
(ဤကဗျာလိုလိုစာလိုလို စာစုတွင် မပါဝင်လိုက်ရဘဲ ကြွင်းကျန်ရစ်သော မြန်မာလူထုကြီး အားကိုးအားထားပြုနိုင်ရာ အမည်ရှင်များ သီးခံခွင့်လွှတ်ကြပါလေကုန်။)
လက်ပံတောင်းကို ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အလဲအလှယ်လုပ်ခဲ့ရပုံရပါတယ်။
သန်းရွှေဟာ ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို မက်လုံးပေးပြီး တောင်၃၃လုံးကို သိမ်းပိုက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
ပြည်သူတွေမုန်းအောင် ကျားတကောင်ကိုပြပြီးနှစ်ကွက် စားဖို့ပြင်ဆင်ထားပါပြီ။
တောင်၃၃လုံးရဲ့အကျိုးအမြတ်ကဘယ်လောက်ရှိမယ် ဆိုတာမခန့်မှန်းနိုင်သလို ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟာလဲ
ဘယ်လိုလှဲ့ကွက်တွေသုံးလာဦးမယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။ ကောက်ကျစ်လှတဲ့ သန်းရွှေဟာလွယ်လွယ်နဲ့တော့ပေး
မှာမဟုက်သလို မတူညီတဲ့အရာနှစ်ခုကို လဲလှယ်ခြင်းကလဲ သဘာဝမကျ လှပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သူ့လှဲ့ကွက်တွေထဲကို ဝင်မသွားကြဖို့ အရေးကြီးလာပါပြီ။ အားလုံးသတိရှိကြဖို့လိုလာပါပြီ။
Unity To Fight Dictatorship said...
- ပထမအချက်အနေနှင့် ဦးပိုင်နှင့် ဝမ်ပေါင်တို့က အကျိုးအမြတ်၏ရာနှုန်း၈၀ကျော် (ယခုအခွန်ပါယ်ထုတ်တာပါထပ်ပေါင်းလျှင် ၉၂ရာနှုန်းကျော်) ကိုဝေငှယူကြမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်သည့်၈ရာနှုန်းကိုသာ တိုင်းပြည်က ခံစားရမည်ဖြစ်သည်ကို မည်သို့သောပညာရှင် အတွေးအခေါ်ကြီးမားသူက နိုင်ငံအတွက် အကျိုးများသည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်သလဲ ဆိုတာ အလွန်စဉ်းစားစရာကောင်းသော အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော တွက်ချက်ရောင်းချမှုမျိုးနှင့်ဆိုလျှင် စစ်အစိုးရလက်ထက်ကော၊ နောက်တက်လာချင်တက်လာ နိုင်သော ဒေါ်စုအစိုးရလက်ထက်ကော ရောင်းချတာအားလုံးက တိုင်းပြည်ကို လုံးလုံး အပေါစားရောင်းချသလို မဖြစ်ပဲနေမှာမဟုတ်တာကတော့ ရှင်းပါသည်။ မည်သည့်တွက်ချက်မှုနှင့်မည်သည့်ရှုထောင့်က ကြည့်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းကျိုးရှိသည်ဟု သုံးသပ်ရဲပြောရဲပါသနည်း။ သို့မဟုတ် အဘဦးဝင်းတင်ဝေဖန်သလို စစ်အစိုးရကို အလွန်ကို အလိုလိုက်အကြိုက်လုပ်ပေးချင်နေသောစိတ်များဖြင့် ဖုန်းပြီး ကြိုက်တာအကုန်ပေးမယ်စိတ်ပေါက်နေသော ကြောင့်လား။
- သဘာဝအရင်းအမြစ်များအကြီးအကျယ်ထုတ်ယူသောလုပ်ငန်းတို့တွင် လုပ်ငန်းမလုပ်ဆောင်မှီ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်၊ လူသားများ၊ ရှားပါးတရိစ္ဆာန်များ၊ ထိခိုက်နိုင်မှုကို လေ့လာဆန်းစစ်သော Environmental Impact Assessment (EIA) ကိုလုပ်ဆောင်ရပါသည်။ ထိုဆန်းစစ်မှုတွင် အထက်ပါအကြောင်းအရာများသာမက ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာ၊ သမိုင်းအမွေနှင့်မှတ်တမ်းတင်အထွတ်အမြတ်ထားရာများအကြောင်းကိုလဲ ထည့်သွင်းဆန်းစစ်ရသည်။ ထိုသို့မလုပ်ပဲ ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်း အမွေတို့ကို တရုတ်အလိုကျပေးသင့်တယ်သတ်မှတ်လျှင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပါတ်သက်တာအားလုံး၊ သမိုင်းနှင့်ပါတ်သက်တာအားလုံး၊ ဘာသာရေးဆိုင် ရာအထွတ်အမြတ်အားလုံး (ရွှေတိဂုံဘုရားအပါအဝင်) ရောင်းစားချင်သလိုရောင်းစားခွင့်ပြုတာဖြစ်နေပါမည်။ ကိုယ့်အမျိုး၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တို့ကို ထိမ်းသိမ်းရေးကို အလေးထားရမည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်ကို ရေတိုအကျိုးအမြတ်တခုရဘို့အတွက် ရောင်းစားတာမျိုးမလုပ်သင့်တာကိုလည်း လူမျိုးတိုင်းအသိဖြစ်သည်။ လူထုခေါင်းဆောင် တယောက်လုပ်ပြီး လူထုဘက်မှမရပ်တည်ပဲ မဟုတ်မမှန်လုပ်ထားသည့် ဦးပိုင်နှင့် ဝမ်ပေါင်တို့ဘက်လိုက်ခြင်းသည် အလွန်ရှက်စရာကောင်းသော ဖအေ့မျက်နှာချီးသုတ် သည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ရေအဆင့်အတန်း၊ လေထုအဆင့်အတန်းတို့က နိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပဲ နိမ့်ကျနေသည်ကို ဖေါ်ပြထားသည်ဆိုလျှင် ကျေးဇူးတင်ရပါမည်။ သို့သော် ဝမ်ပေါင်တရုတ်တို့ကသူတို့လုပ်ငန်းရယူစဉ် မြန်မာနိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီအောင်လုပ်ကြောင်းပြောပေလိမ့်မည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုသို့သော သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်စည်းကမ်းများချမှတ်ထားရခြင်းမရှိသေးချေ။ ထိုဝမ်ပေါင်ကုမ်ပဏီအနေနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်သာ ထိုသို့လုပ်လျှင် မည်သို့သော အပြစ်ဒါဏ်မျိုး မည်သည့်လျှော်ကြေးမျိုးပေးဆောင်နေရမည်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဝမ်ပေါင်လို တရုတ်ကုမ်ပဏီကလဲ အမေရိကန်တွင် ဘယ်လောက်အမြတ်အစွန်းရရ သွားမလုပ်ပါ။ ကြိုက် သည့်နေရာကြိုက်သည့်ဘက်မှ သွေးစုတ်လို့ရသော မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တည်ငြိမ်မှုမရှိသေးသော အာဖရိကနိုင်ငံများတွင်သာ အလုပ်လုပ်လေ့ရှိသည်။ တကယ်သာ သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုအတွက် ယခုလက်ရှိဖြစ်ပြီးသောညစ်ညမ်းမှုကို ပြန်လည်သန့်စင်ရေးလုပ်ရမည်ဆိုလျှင်ပင် ဝမ်ပေါင်ကော၊ ဦးပိုင်ကော တရုတ်နိုင်ငံကော ဒေဝါလီခံ ကြရမည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်ကို မျက်နှာသာပေးလိုသူတို့လဲ ထိုအထဲတွင် လိုက်ပါသွားကြရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပြီးလျှင် ပြန်လည် ထိမ်းသိမ်းရန် ငွေကုန်ကျေးကျလွန်စွာများ၍ မျိုးဆက်အဆက်ဆက်ချီကာလုပ်ရလေ့ရှိသည်။ အမေရိကန်တွင် ထိုသို့ဖြစ်ထားသော နေရာမျိုးကို အစိုးရစရိတ်ဖြင့် နှစ်ရှည်လ များလုပ်နေကြရဆဲရှိနေသေးသည်။ ဝမ်ပေါင်နှင့်ဦးပိုင်တို့အမြတ်ထုတ်ဘို့အတွက် ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားမျိုးဆက်သစ်များတို့ ပေးဆပ်ကြရမည်လော။ လက်ရှိဖြစ် ပြီးသားညစ်ညမ်းမှုကို ပင်မလုပ်နိုင်မရှင်းနိုင်သည့် ဝမ်ပေါင်နှင့်ဦးပိုင်က ဆက်လုပ်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
တရုတ်နိုင်ငံ၏သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေး၊ လူသားများအပေါ်ဂရုထားမှု လက်ရှိအနေအထားကိုလဲ လေ့လာကြည့်သင့်သည်။
စစ်အစိုးရအလိုကျလိုက်လုပ်ပေးချင်သောသူနှင့် စစ်အစိုးရအခွင့်ထူးခံများပေါင်းပြီး မဟုတ်တာလုပ်ကြသည်ကို လက်ဝါးနှင့်လိုက်ကာနေ၍ရမည်မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ထိုဆိုးကြိုး များက မခြောက်လှန့်သေးလျှင်လဲ အနာဂတ်တွင် မျိုးရိုးစဉ်ဆက် ခြောက်လှန့်ခံရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံက ရောက်လေရာရာမှာ အမြတ်ထုတ်ယူသွားသည်သာ ရှိ သည်။ မည်သည့်နေရာတွင်မျှ ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးသွားတတ်သည်မျိုးမရှိပါ။
အသိ သတိ ပညာပြည့်သူတစ်ယောက်ဆိုတာ
မီးပုံထဲ ရဲရဲကြီး ခုန်ဆင်းပြလိုက်တာ
အသုံးချ ခံရဲပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့တဲ့
ရလဒ်ကတော့ အစီရင်ခံစာကို တလုံးတပါဒမျှ မဖတ်ရသေးသော၊ နားမလည်သော emotional ဖြစ်နေသည့် ဒေသခံ လူတစ်စု၊ နှစ်စု မျှအပ တနိုင်ငံလုံးက အမေစုရဲ့ စေတနာနှင့် မဆုတ်မနစ်သော ဇွဲ၊သတ္တိနှင့် တာဝန်ခံမှုကို ပိုမိုသိမြင်လာကြပြီး အမေစုရဲ့ political power အဆပေါင်းများစွာ တက်သွားတာပါပဲ။
Blogger စန်ဒရာ said...
we still love su and her decision is best for our nation.
we support you (mother su)
I think your idea is something wrong. Makeadecision is not base on heart feeling. This is base on real conditions.
No friend, She makeadecision base on real conditions and make it draw from the public site. Not base on heart feeling. Nowadays the regional peoples are futhure less. So, she makeafuthure for the regional people.If you arealeader, you will understand. I totally agree with Anti Su.
yarzarဆိုတဲ့ခွေးသူတောင်းစား မင်းမေက လူလူချင်းကုံးပြီးမွေးထားတာဟုတ်ရဲ့လား?မင်းက ဘယ်လောက်သိနေလို့ဒီလိုပြောရတာလဲ ဒေါ်စုက နိုင်ငံအတွက် နစ်နာအောင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲ၊ ခုချိန်မှာ ခုလိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ “ဒို့အရေး” လုပ် ခေါင်းထောင်ရဲလာတာ၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်စရောက်လာတာ၊အရင်ကထက် ပွင့်လင်းမြင်သာလာတာ အစရှိတာတွေဟာ ဒေါ်စုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်လာပြီးမှ ဒီအခြေအနေရောက်လာတာ လူတိုင်းအသိပါ။သူ့ဘဝမှာဘယ်လောက်ထိအနစ်နာခံခဲ့လဲ လူတိုင်းအသိပါ။တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး ဒီမိုကရေစီရဖို့ သာလေး ၇နှစ်သားလေးကိုစွန့်ခွာ ခင်ပွန်းသည်သေဆုံးတာတောင် TVကြည့် သဂြိဟ်ခဲ့ရတယ်။ ပြောရမယ်ဆို မကုန်နိုင်ပါဘူးးးးးးးးးးးးးနောက်ပြီးတော့ ကိုလင်းလင်းကို ပုတ်ခက်ရေးသားသွားသေးတယ် မင်းကခွေလောက်မှ အသိမရှိတဲ့ကောင်ပဲကွ။လူဆိုတာ လူ့အသိရှိရတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးပြုမည့် သူကို သူက အသက်ပေးကာကွယ်တာကွ။မင်းစိတ်နဲ့မနိုင်းရဘူးလူတိုင်းကို။ တန်ဖိုးရှိတဲ့သူဆိုတာ ကိုလင်းလင်းလိုလူမျိုးဆိုတာ အသိဥာဏ်ရှိတဲ့သူတိုင်း သိနိုင်တယ်။ နေရရချင်လို့မဟုတ်ဘူးကွ သူ့ရဲ့အချိန်တွေကို တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချကုန်ဆုံးသွားနေတာ။ လူဆိုရင်လူအသိနဲ့လူစကားပြောကွ ခွေးစကားလာမပြောနဲ့းးးးးးးးးးးးးးးးး
ဒေါ်စုဟာ ဘာမှန်းမသိပဲ ဂဂ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသလို။ ဘာမှန်းမသိလိုက်ပဲ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျသွားပြန်ရော။ အခုလဲ ဘာမှန်းမသိပဲ အိမ်ထဲကပြန်ထွက်လာပြီး ဘာမှန်းမသိတဲ့ လွှတ်တော်ထဲကို မျက်စိကလဲနားကလယ်နဲ့ ၀င်သွားပါတယ်။ အခုလဲ သူရရွှေမန်း ခန့်ထားတဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကောင်စီမှာနေရာရလာပြီး ဘာမှန်းမသိတဲ့ လက်ပံတောင်းတောင် အစီရင်ခံစာကိုထုတ်လိုက်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံလဲ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာ ဘာမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး အရပ်ကတို့..။ သူမ ဟော်ပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကလဲ ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ တကယ်တော့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေပါပဲ ကွယ်ရို့။။။
yes ... heart ထိတယ်
ဝေဘာ ဆိုသူ ပြောတာ မှန်တယ် လူစကား သူမသိ သနားပါဘိ ဝေဘာဆိုတာ ခွေးဖြစ်ဘို့များ လူမဟုတ်ဘူး ခွေးမျိုးခွေးနွယ်က လာတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ် နံမယ်ကလဲ ငါ့ခွေးနံမယ်နဲ့ဆင်တယ် ငါ့ခွေးက ဗီ
“ဝေဘာ” ဆိုတဲ့လူ ခင်ဗျားဘယ်မှာအိပ်ပျော်နေတာလဲ။ဒေါ်စုကိုအပုပ်ချချင်လို့ မကောင်းကြံချင်တဲ့စိတ်တွေနည်းနည်းလျော့ပါ့ဦး။ဒေါ်စုက ဘာမှန်းမသိဘူးပြောရအောင် ခင်ဗျားကဘယ်လောက်သိနေလို့လဲ။ ဒေါ်စုကိုဒီလောက်ထိမကောင်းကြံပုပ်ချချင်နေတာ ဒေါ်စုက နိုင်ငံအတွက်မကောင်းတာတွေဘာလုပ်ခဲ့လဲ၊ နိုင်ငံအတွက်နစ်နာအောင် ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ၊ပြည်သူတွေနစ်နာအောင်ဘာတွေများလုပ်နေလို့လဲ၊ ဒီနေ့အချိန်မှာ “ဒို့အရေး ဒို့အရေးးးးးးး”လုပ်နိုင်ပြီး ဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာဘယ်သူလဲ၊ဒေါ်စုက သာယာတဲ့သူ့မိသားစုလေးကိုစွန့်ခွာ ခင်ပွန်းသည်ဆုံးတာတောင် TVကြည့်ပြီး သဂြိုဟ်ခဲ့ရတယ်။သားလေး ၇နှစ်သားအရွယ်ကိုစွန့်လွတ်ပြီး နိုင်ငံကောင်းကျိုးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာ နိုင်ငံတိုးတတ်ဖို့ သေနက်ပြောင်းဝရှေ့ရပ် အသက်ဘေးကြုံခဲ့ရတဲ့အကြိမ်မနည်းပါဘူး။ဒီမိုကရေစီရဖို့ သူ့မိသားစုလေးကို စတေးပြီး အများပြည်သူအတွက် ဘယ်လောက်ထိပေးဆပ်ခဲ့လဲ အားလုံးအသိပါပဲ။ လူလိုအသိမရှိ ကိုယ့်အတွက်ပဲကြည့်တတ်တဲ့ လူတွေတော့ ဘယ်သိမလဲနော်။နိုင်ငံအတွက် အခုလိုအခြေအနေရောက်အောင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ထောက်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာပေးဆပ်ခဲ့ရလဲ၊ ဒေါ်စုသာ ဒီလိုမပေးဆပ်ခဲ့ရင် ခုလိုလက်ပံတောင်းတောင်ကအစ တစ်ခြားမြန်မာ့မြေပေါ်မှာ “ဒို့အရေးးးးးးဒို့အရေးးးး”လုပ်ဖို့နေနေသာ အီးတောင်ကျယ်ကျယ်ပေါက်ရဲခဲ့လို့လားးးးးးးးးးးးးးခင်ဗျားပြောစမ်းပါးးးးးးးးး။ခင်ဗျားတော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတဲ့လူပဲဗျာ။ခင်ဗျားလိုလူတွေရှိနေတာ နိုင်ငံအတွက်အများကြီးအကျိုးယုတ်စေပါတယ်။သူများကိုဝေဖန်အပြစ်တင်ချင်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ သူလိုဦးဆောင်နိုင်ရဲ့ လုပ်နိုင်ရဲ့လား ကိုယ့်မှာရော သူလိုအရည်အချင်းရှိရဲ့လား ကိုယ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ရပ်က ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ သေချာပြန်စဉ်းစားပါ။“ဘုရားကိုသတ်ပြီးဘုရားဖြစ်ချင်တဲ့ ဒေဝဒတ်ဥာဏ်နဲ့”တော့ ဒေါ်စုကိုမပုပ်ခက်မစော်ကားပါနဲ့။ခင်ဗျားမှာ လူ့အသိစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားကိုမွေးထားအမေက လူလူချင်းမျိုးစပ်ပြီးခင်ဗျားကိုမွေးထားတယ်ဆိုရင် အများကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်နေတဲ့သူကို ကျေးဇူးပြုပြီး မစော်ကားပါနဲ့းးးးးးးးးးးးးးကျွန်တော့်စကားတွေရိုင်းပြမိရင် အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်